कीर्तिपुर सन्देश साप्ताहिक: चुनावी सरकार
प्रधानन्यायधीस खिलराज रेग्मीले चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री हुने शंकेत दिनु भयो रे चार दलले उक्त शंकेतको स्वागत र समर्थन गरे । लोकतन्त्रको आधार भनेको चुनाव हो । आवधिक चुनाव पदावधि सकेपछि नै गर्नु पर्ने हो । संविधान सभाको अवधि दुई वर्षको मात्र थियो तर संविधान बनाउन समय कम भयो भनेर पूर्व सभासदहरुले रबर जस्तै तानेर पुरा चार वर्ष पु¥यायो । आखिर नयाँ संविधान बनाउन सकेन बरु संविधान सभा नै विघटन भयो । संविधान सभाको नयाँ चुनाव गर्न बाबुराम सरकारले पटक पटक तिथिमिति घोषणा गरे तर चुनाव हुन सकेन । चुनाव गर्न नसकेको त उसैलाई हाइसन्चो भयो । सरकार पनि टिकिरहने आफनो मनपरि आफनो पोल्टामा बजेटको भारी विसाउन पनि पाउने अवस्थाले मख्ख नै भएथियो । एकातिर चुनावी सरकारको सहमति मनमा नहोस् भन्ने चाहना भएपनि अर्काेतिर विपक्ष सबै चुनाव नहचाहेको आरोप लगाउँदै आएको थियो ।
हुन त बाबुराम सरकार लामो भएको प्रचण्डलाई पनि भित्रदेखि मन परेको थिएन । त्यसैले कहिले शुशिल बाजेलाई प्रधानमन्त्री बनाउने त कहिले आफनो नाम नै प्रधानमन्त्रीमा सिफारिस नगरेको वा सरकारको दादुपन्यु आफनो हातमा नदिएकोमा विपक्षहरुलाई गाली गर्दै हिडे । आखिर बहालवाला प्रधानन्यायधिसलाई प्रधानमन्त्री बनाइ चुनाव गर्ने कुरा एमाओवादीको हेटौडामा सम्पन्न सातौ महाधिवेशनमा प्रचण्डले ल्याएको ओखतीले काम गर्न लागेको छ । न्यायपालिकाको प्रमुखलाई कार्यपालिकाको पनि प्रमुख बनाउने औषधी प्रभावकारी कति हुन्छ हेर्न बाकी छ । विशेष गरी एउटै दलमा पनि त्यो प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा उभिदाँ नेपाली काङग्रेस, नेकपा एमाले र मधेशवादी दलहरुमा पनि विभाजित छन् । तर पनि अन्तिममा ‘नहुनु मामा भन्दा कानो मामा निको’ भन्ने उखानलाई लागु गर्ने संकेत छ र पनि नेकपा (माओवादी लगायत अरु माओवादी र मधेशवादी दलहरु त्यसको विरुद्ध आन्दोलनमा छन् ।
चुनाव त गर्ने तर के को चुनाव गर्ने नेपाली जनताले फैसला गर्न बाकी छ । आखिर संविधान सभाको चुनावले चारवर्षमा गरेको खर्चले संविधान दिन नसकेपछि आगामी दिनमा मात्र संविधान आउँछन् भन्ने ग्यारेन्टी छ ? संविधान सभाको चुनावसँगै के स्थानीय निकायको चुनाव आवश्यक छैन ।
सभासद हुन चाहने र सक्नेहरुको मात्र लोकतन्त्र हो । स्थानीय निकायमा लोकतन्त्र वा निर्वाचित जनप्रतिनिध चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि दलहरुलाई , प्रधानमन्त्री भएका र हुनेहरुलाई सरोकारको विषय किन बन्दैनन् ? आदि प्रश्न बनेको छ ।
त्यसैले स्थानीय निकायको निर्वाचन विना संविधान सभाको च्ुनाव सम्भव छैन । स्थानीय कार्यकर्ताहरुले स्थानीय निकायको चुनाव पनि माग गर्नु आजको आवश्यक छ । जग बलियो नभइकन घर बलियो हुदैंनन् भन्छन् तर लोकतन्त्रको जग कच्चा बनाई संविधान रुपी घर कसरी बन्छन् । सबैले हेक्का राख्नु पर्दछ ।
Posted by raj shrestha at 11:15 AM